Izinto ezi-5 ekufuneka uzazi malunga neememes | Iindaba zeGajethi
Demva kokuhlalutya iimemes ezininzi kunye nokulandela amanyathelo e-meme ethile, kulandela ikhonkco ukusuka kwimvelaphi yalo ukuya kwimbetho yokugqibela (kwinyanga kamva), ndithathe isigqibo sokwabelana nawe ngezigqibo endizenzileyo malunga neememes.
1) Imemor ayifanelanga ukufumana amakhonkco.
SUkuba ucinga ukuba ukuqala okanye ukuqhubeka kwememe kuya kukunceda ufumane amakhonkco amaninzi angenayo, uyaphosisa. Andrea, owandulela ikhonkco elilandelelwe kwi-Meme Connection, wamema iibhlog ezingama-22 ezakha uthungelwano olubandakanya ngaphezulu kweeblogi ezili-150. UAndrea ufumene amakhonkco angama-10 angenayo ngaphandle kwenani leebhloko. UAndrea wayenethamsanqa, wafumana i-45% yamakhonkco ngaphezulu kwenani lezimemo, kumaxesha amaninzi le pesenti yehla yaya kwi-zero.
2) Injongo ephambili ye-meme kwaye kufuneka ibe yintlalo yeblogi.
En la maxesha ePageRank kunye nemveliso yeeblogi, ekuphela kwendlela yokuvula isithuba esincinci sabaqalayo kukunxibelelana nebhlog yakho. Iimemo zezona ndlela zilungileyo zokufikelela esiphelweni kwaye ukucinga ngale ndlela yindlela onokuthi uthathe inxaxheba ngayo kwimeme.
. CZingaphi iibhlog ozaziyo ngePageRank 4 nangokutyelelwa imihla ngemihla okungama-20? Kwaye nge-PR 5 kunye ne-500 okanye ukutyelelwa okungama-1000? Banayo le PR kuba banobudlelane neebhloko zabo, hayi kuba umxholo wabo unomdla kuwo Uphando, kungoko inani lotyelelo, kodwa kuba linomdla ebantwini. Cinga ukuba kwi-Intanethi, amakhonkco phakathi kwabantu athambekele ekubeni ziikhonkco ezinokucofa. Ukuthatha inxaxheba kwiimeme kunceda kakhulu ukuba nomtsalane ebantwini, abathi emva kwayo yonke ibe ngabo kuphela abenza amakhonkco (uGoogle yenye into).
NNdimele nditsho ukuba ukuba unika umxholo olungileyo uya kugqibela ngokudityaniswa. Kodwa, ukungahoyi iisayithi "ezinkulu" ngokwenyani, inani lamakhonkco liya kuhlala lingaphantsi kunokuba unikezela ngesiqulatho esihle kwaye "sisentlalontle".
PKodwa sukucinga ukuba ngoku imalunga nokuqala okanye ukuqhubeka kwememes ukumema ekhohlo nasekunene. Kukho izikhokelo ekuya kucetyiswa ukuba uzilandele xa uhambisa imeme. Siza kubabona kula manqaku mathathu alandelayo.
3) Ukuba uqala isimemo se-meme ubuncinci abantu abali-10.
EIpesenti yokuphendula kwimeme iyahluka kakhulu, ukusuka kwi-0% ukuya ngaphezulu kancinci kwi-100% (xa iphendulwa ngabantu abangamenywanga ngokuthe ngqo). Gcina ukhumbule ukuba njengoko i-meme idluliselwa, inqanaba lokuphendula liya kuncipha ngokubanzi. Ke ngoko, ukuba uqala enye, kufuneka uthumele inani elibonakalayo lezimemo ukuba ufuna zisasazeke kancinci. Ukuba umema abantu abangaphantsi kweshumi ukuba baqhubeke, unethuba elihle lokuba i-meme izakusweleka emva kwezizukulwana ezimbalwa.
4) Ukuba umenyiwe kwisimemo se-meme ngokumodareyitha.
EInqaku langaphambili libonise ukubaluleka kwenani lezimemo ze-meme ngokunxulumene nempumelelo ekusasazeni kwayo. Kusengqiqweni ukuba xa umntu eqala i-meme afuna ukuba isasazeke kancinane, kodwa ukuba awunguye umenzi okanye umqalisi wetyathanga akufuneki usebenzise kakubi izimemo. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ukuba uhlala ufumana ii-meme kwaye umeme abantu abaninzi uza kugqiba ukubazalisa (uyabadika) kwaye bayayeka ukuphendula. Cinga ukuba ayinguwe wedwa odlulisa imemes kwaye ukuba sonke sithumele iimemes ezininzi kubantu abaninzi isiphumo siyakuba ngokuchasene noko kufunwayo. Abantu abafumene uninzi lweememes banokukhetha ukungabahoyi okanye kuphela abo bantu basondeleyo baya kuphendula.
RKhumbula ukuba kufuneka umeme ngokumodareyitha. Abantu badiniwe kukuphendula iimemes. Inani elifanelekileyo linokuba zizimemo ezi-2, 4, okanye ezi-6 kwimeme nganye.
5) Ulawulo lweepesenti ezingamashumi amahlanu.
PUkunxibelelana nebhlog, eyona nto ifanelekileyo kukugcina ibhalansi ye-50% kwizimemo zakho. Qiniseka ukuba isiqingatha seememo zakho zezobhlogi ezinobuntu, oqhele ukusebenzisana nazo, kwaye esinye isiqingatha seeblogi ozithandayo nezifundwayo kodwa ongakhange uthathe inxaxheba kuzo (ubeke izimvo). Ngale ndlela uya kuhlakulela ubudlelwane obutsha ngelixa ugcina abo unayo.
SNdicinga ukuba wonke umntu uya kuba nezakhe izimvo ngalo mbandela kwaye baya kuzenzela izigqibo (mhlawumbi ezininzi zichasene noku kuchazwe apha). Ndiyathemba ukudibana kwaye sibonisane ukuba uyafuna izimvo. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Izinto ezi-5 ekufuneka uzazi malunga neememes
Ndikhetha ukungabalandeli ngenxa yezizathu ezininzi. Uninzi lwazo alubonakali luthanda kakhulu kum kwaye injongo yokufumana amakhonkco emva kokuba meme icacile. Ezinye izizathu kukungabikho kwexesha lokuzenza, woyike ukuba izimemo ziya kukhula ngokucacileyo ukuba ndiyavuma ukuyenza. Ekugqibeleni ibhlog iyadinisa umfundi kwaye nawe kwaye ekupheleni kosuku kufuneka ubhale ntoni ufuna, ngaphandle kokulalanisa.
Inqaku elilunge kakhulu, uchaza izinto eziqaqambileyo.
Ewe u-Ulyses inyani kukuba ii-memes zivelisa oko, ukwaliwa ngaphambi kobuninzi obufanayo kwaye emva koko kuya kuphendulwa, njengoko usitsho ukuba wabelane.
Ngapha koko, njengoko benditshilo kwinqaku, ikhonkco liyisekondari kwaye ndiza kuyidlala. Umbuliso.
Utshaba lukawonkewonke khange sinyathele ukubhala izimvo.
Unyanisile ukuba abaninzi benza iimemes zokufumana amakhonkco, kodwa njengoko ubona kwinqaku, le njongo ifezekiswa ngokuyinxenye. Ngethemba lokuba abantu bazakuqala ukunika iimemes usetyenziso olungaphezulu koluntu.
Ngokumalunga nokungaphenduli, ndicinga ukuba wenza kakuhle ukuba awuziva, kodwa xa uziva ngathi uphendula enye, yenze kwaye ungoyiki ii-avalanches zeememes. Akukho mntu usezingqondweni zakhe onokucaphuka kuba ungaphenduli. Kwaye ukuba uyacaphuka uyazi ke
Ngokuphathelele "ibhlog ediniweyo" kufuneka ndikunike ngokuchanekileyo, ngumqolo wokundwendwela ibhlog kwaye ubone meme zonke izithuba ezihlanu. Into endiyenzayo kukuba xa ndibona ukuba kufika isimemo ndisibhala phantsi kwincwadana kwaye ndilinde ithutyana phakathi kwempendulo enye nenye. Unokwenza njengoko ndenzayo xa ndiphendula enye, andikhawuleli ekuphenduleni, kodwa ndibhala umqulu omkhulu xa umntu enexesha kwaye efuna ukumosha ngokufunda, ke ngokongeza into yexabiso kwimem.
Enkosi ngokuphawula nangamazwi akho. Umbuliso.
Ndiyathanda ukwenza iMemes, kuba ndiyathanda ukuba abantu bazi izinto ngam kwaye banxibelelane nebhlog yam.
Into embi ziiveki ezintathu okanye ezine ezifika ngazo ... Ndikhethe ukuziqokelela zonke kwaye ndenze uninzi lweveki meme post
Inyaniso kukuba le yinto elungileyo kakhulu ukubaqokelela kwisithuba esinye. Xa ndingenakuthetha kakhulu ndiza kusebenzisa ubuchule bakho.
Kule memes, andivumi nam. Kwelinye icala, inyani kukuba banokudina, kodwa kwelinye icala, bakwenza ukuba wabelane ngamava okubhloga ngokungaphaya kunokuba ungazenzi.
Kwelinye icala, ndiyayithiya imixokelelwane yememes engacwangciswanga kakuhle, kwaye apho kungekho kubekwa phambili kuluhlu. Ngale ndlela, nabani na oqinisekisa ukuba unxibelelene, ngabantu bokuqala be-meme.
Ndicinga ukuba ii-meme zamva nje ziyaphulukana nentsusa ...
Kwakhona, kuyadina ukufumana 4 ngokulandelelana. Kwenzeke kum kanye, kwaye ndakhetha ukukhetha eyona "inomdla" kwaye ndiyiphendule. Kodwa andikho kwiimeme, ngaphandle kokuba zihlekisa okanye zintsusa.
Sukuba nexhala ndizakugqithisa meme ... ahaha ... ngalo Mgqibelo sendine 2
Ngaba unokusebenzisa ezinye iicokies ukugcina idatha xa ugcwalisa le fomu? Kuluxinzelelo ukuba kufuneka ungene ngalo lonke ixesha ... kodwa akukho nto ... ayibizi mali ingako ukufaka idatha ...
rubisf uchanile bekufanele ukuba kudala ndiyenzile. Ndiza kwangoku nayo. Umbuliso.
Ingxaki ye rub rub ilungisiwe. Ukuba uqaphela into engaqhelekanga, nceda usazise. Umbuliso.
UFernando ndicinga ukuba ukufumana okuninzi ngokulandelelana kuyakhathaza kancinci, ngakumbi xa bengenamdla okanye bengowokuqala. Okwangoku andifumani zininzi ukuze ndidikwe. Ndiza kukuxelela. Ukubulisa.